नेपाली साहित्य चौतारी
नेपाली साहित्य चौतारी बिशुध्द नेपाली साहित्य थलो हो जहाँ हरेक नेपाली साहित्य अनुरागिले आफ्नो रचना तथा कृति प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ । नेपाली साहित्यको बिकास र संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले यो आधार निर्माण गरिएको हो । तपाईंहरुको सल्लाह, सुझाब, साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । तपाईंको निरन्तर भेटले हामी हाम्रो नेपाली साहित्यलाई अझै माथि उकास्न सक्छौं । मित्रहरु तपाईंको मनको धारणा बिना हिचकिचाहट पोख्नुहोला । धन्यवाद
बिद्वान र बिध्दता सर्बोपर्य हुदो रहेछ । एऊटा लेखकको जस्तो मात्रै लेख लेख्ने एऊटा स्थापित हुन नसकेको लेखक म जस्तोको लागी बिश्व हिन्दु सम्मेलनमा भाग लिन पाऊनु सौभाग्य थियो । आयोजक राष्ट्र र सरकारकै अगाडी नेपाली एक बिद्वान तथा गुरूले आफ्नो साहित्य र कलाले यसरि प्रहार गरेकी नरेन्द्र मोदी थुक निल्नै सकेनन् । शुष्मा स्वराजको पसिना आयो ।
आफु बिश्वको एक हिन्दुहरूको संस्थागत राष्ट्र रहेको र भगवान रामको जन्मभूमी तपोभूमी र भगवानहरूले बास गरेको देश भनि रहेका भारतिय प्रधानमन्त्री र बिदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजको अगाडी नेपालको परिचय दिदै ऊक्त बिद्वानले यसरी प्रहार गरे -
हिन्दुहरूको मेन शास्त्र बेद हो र बेद बिग्यान पनि हो । यो बिदेशीले चोरेर प्रयोगात्मक रूपमा सिध्द पनि छ । बेदमा कर्मको आधारमा मानबहरूको आस्था र बनावटको आधारमा जातियताको कुरा गरिएको छ । रामायण, महाभारत हरिबंश पुराण जस्ता धार्मीक ग्रन्थहरू ऊपन्यास जस्तै लेखोट हुन् जहा कुनै जात र ब्यक्ति बिशेष कुरा गर्नु सामान्य छ । कुनै राजाले पेशा र स्तरको आधारमा जातीय अखडा ल्याएको जिकिर गर्दै यसरी भने -
नेपाल सानो छ तर बिश्वको गुरू छ । सत्य युगका रिषी मुनीहरूले तपस्या नेपालमा नै गर्दथे । राम कृष्ण तथा भगवानको अवतारहरूको कुरा भारतलाई ठहराए पनि गुरू नेपालकै थिए । ति बिलासी राजा र महाराजहरूलाई सम्झाऊने गुरू तथा रिषी नेपालकै हुन् । शरिर चलाऊने मष्तिक नेपाल नै हो । भारतमा आदर्श फैलाऊने नारी सीता नेपालकी हुन् । बिश्वमा शान्ती फैलाऊने बौध्द धर्मका भगवान बुध्द नेपालकै हुन् । राजा दशोरथ रामका गुरू नेपाली नै हुन् । भगवान बिष्णु तथा श्रीकृष्णका गुरू तथा रिषी नेपाली नै हुन् । सानो राज् जितेर ठूलो भारत बनाऊने सिकन्दर तथा अशोकका गुरू नेपाली हुन् । बिश्वको खतरनाक रोगको औषधी तथा जडिबुटीको गुरू नेपाल मै छ । नेपालीको आफ्नै शान छ तथा मान छ ।
भारतमा भ एको अंग्रेज भगाऊ आन्दोलनका प्रमुख महात्मा गान्धीको गुरू नेपाली नै थिए । भारत स्वतन्त्र गराऊने नेपाली नै हुन् । दोश्रो बिश्व युध्दमा जर्मनी हराऊने महान् ब्यक्तिहरू नेपाली नै थिए । हिन्दु धर्मको स्थापना नेपालबाटै भ एको हो । गुरूले नै आचारण , नैतिकता तथा धर्म सिकाएर राम जस्तो ऊदार तथा महा पुरूष स्थापित गरेका हुन् । नेपाली शेना भारतमा छ र त भारत ढुक्क छ । एऊटा गुरूलाई भारतले अपमान गर्यो जसको कारण भारतमा नैतिकता आचारण र धर्म हरायो । हतियारधारी र पैसाको आधारमा ब्यक्तित्वको तुलना हुन सक्दैन ।
अरू धर्म र ब्यक्तिलाई सम्पत्ति र हतियारको भरमा दबाऊने बिश्वकै लज्जित ब्यक्तित्व हो । आतंक र अपराधको खोल ओढेर जातिय र धार्मीक युध्द ऊचालेर धर्मको ऊचारण गर्नु गलत हुन्छ । त्यस्तो ब्यक्तित्वबाट हिन्दु धर्मको ब्याख्या गर्नु गलत भन्दा मोदी पसिना पसिना भ ए। मोदीलाई एऊटा अपराधीको रूपमा चित्रण गर्दै मोदीको मुख बाट हिन्दुधर्म जस्तो स्वच्छताको ऊच्चारण गर्दा हिन्दु धर्मकै बेईज्जत गराएको भनि रहदा नरेन्द्र मोदीको पसिना न आयोस् पनि कसरि ?
जहा गुरूको अपमान हुन्छ त्यहा बिनाशको संकेत हुन्छ । भलै ऊ रूपमा अगाडी होस् आर्थीक सम्पन्नताले अगाडी होस् हतियारले सु सज्जीत होस् र आफुलाई बिश्वमा अग्रसर ठानोस् तर नैतिकता र आचरण गुमाएपछी ऊ आफै नाश भ एर जाने भनेर भारतकै राष्ट्रियता र अस्तित्व माथी धावा बोले । घमण्ड पतनको संकेत दिदै भारतले नेपालमाथी गरेको अपमानजनक कार्यले भारत देशै पतन हून्छ भनेर प्रष्ट्याए।
त्यहा केही लेन्डुपहरू , राजाका टिकेहरू र राष्ट्रियताको नारा बनाएर सत्तामा चढ्ने ढुलमुले ब्यक्तिहरू थिए । ति सबैलाई दह्रो प्रहार गर्दै नेपालको गौरवतालाई धेरै ऊठाए । माथिल्लो स्तरका सल्लाहाकार , बिष्लेषक र पत्रकारहरूको ध्यान खिचे । एक घण्टा जति त ति बिद्वान नै भारतको प्रधानमन्त्रि जस्तो प्रतित हुन्थ्यो । नरेन्द्र मोदी र शुष्मा स्वराजलाई छोडेर बिश्वका सबै ब्यक्तित्वहरू ऊनी प्रति केन्द्रित र बिचार पोखिरहेका थिए । सबै ऊनले ऊठाएको बिषयवस्तु यहा ऊल्लेख गर्न नसके पनि एऊटा नेपाली बिद्वान बिध्दता माथी न्याय गर्नु मेरो एऊटा कर्तब्य हो ।
धेरै पढेर मात्र बिद्वान हुने होइन रहेछ । नेपालको बाबूराम भट्टराई र सिके राऊतलाई बिग्य र बिद्वान ठान्नेहरू हामीले बिद्वान् ठान्ने हामी मुर्ख रहेछौ ।
बिद्वान ति थिए जसले भारतकै निमन्त्रणामा भारतै प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरूको अगाडी नंगाएका थिए । आफ्नो कला ग्यान र बिद्वताले चलाखी पुर्ण आफु, आफ्नो, आफ्नो घर, समुदाय, देश, भेषभुषा, धर्म, नैतिकता, आचारण र देशकै सर्बश्रेष्ठतालाई जोगाएर बिपछ्यलाई आछ्यु आछ्यु पारीरहेका थिए । लाग्दथ्यो दुष्मनको मुटु हल्लिएको थियो ।
प्रभुको गोडा मोल्ने र पद पैसाको लागी लेन्डुप बन्ने केही आफुलाई बिद्वान ठान्नेहरूको भिडबाट आफुलाई स्थापित gare
Posted by Gajurel Balkrishna at Sunday, February 05, 2017
भोजपुरका धनाड्य ब्यापारीका माईली छोरी सुन्दरी शर्मा आफैमा एउटा सम्पुर्ण नाम हो । २०३८ सालमा एस.एल.सी. सकेर शिक्षक पेसामा लागेका र पछि पेशाबाट अवक...ाशप्राप्त उनका पिताले आफुलाई अब्बल ब्यापारीमा स्थापित गराएका थिए ।
व्यपारीले आफ्नो बाल बच्चालाई मत्याएर पालेका हुनाले । न त कहिल्यै आफ्ना बच्चालाई हप्काउंथे न त कसैले आफ्नो बाल-बच्चालाई हप्काएकै मन पराउँथे । पैसा कमाएपछी यि अलिकति शन्का प्रबृतिको भएका थिए । सुन्दरी शर्माको हसिलो स्वभाबले जो कसैलाई पनि मोहित पार्थ्यो र युवाहरू क्षणभरमै घुलमिल हुन्थे । बच्चा देखी सानो सिन्को पनि नभाँचीकन पढेकी यिनले माध्यामिक तह देखी स्नातक तहसम्म गाउमै बसेर पढेकी थिईन् ।
सानैदेखी घरमा नबसिकन पढेकी हुनाले सोझा बाउ आमालाई माईली छोरीको बारेमा जानकारी थिएन । दिनमा दुई पटक सम्म फोन गरेकाले उनका बाबू आमालाई आफ्नो छोरी ईमान्दार भन्ने नै लाग्थ्यो । उनी काठमाण्डौ उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न आईन् । हरेक चोटी बाबाले पठाएको पैसाको हिसाब दिनु पर्ने भएकोले उनलाई जागिर खाने बिचार जाग्यो । अरब पठाउने म्यानपावरमा जागीर पनि मिल्यो । जवानीले काउकुति लगाएपछी उनलाई छटपटी बढायो । म्यानपावरमा धेरै दलालहरू हुन्थे । दलाल आफैमा बेइमानी र छक्कापञ्जा गर्ने एक जमात हो । यिनीहरू सत्यतामा कहिल्यै पनि हिड्दैनन् ।
स्नाकोत्तर पढ्न आएकी सुन्दरीलाई पैसाको नशा बस्यो । मेनपावरमा तलबको साथै कमिसन पनि बढेसी यिनको फुर्ति बढ्दै गयो । आफैले पैसा कमाएपछी जस्तो लुगा लगाउन र खान पनि पुग्ने । शहरको बिकास संगै उनको पहिरन पनि बदलियो । बिस्तारै कुर्था सुरूवाल छोडेर टाइटवाला फिटीङ् कपडा लगाउन थालिन् । सानै देखी परिवारबाट टाढा रहनाले गर्दा उत्ताउली थिईन् । त्यसमाथी ऊम्लदै गएको जवानीको प्रभावले गर्दा केटा साथिहरू बनाउने यो कुनै अचम्म थिएन । हातमा पैसा टन्नै भएपछी केटा साथीहरूसङ्ग बेला-बेलामा घुम्न जान्थिन् । हसिलो स्वभाबकी धनि सुन्दरी शर्मासंग प्राय सबै युवाहरू प्रभावित हुन्थे । युवतिले हासेर मौका दिएपछी उनका केटासाथीहरू यौवनको फाइदा लिन बिस्तार हात हालेरै चल्दथे । जवानीको काउकुती लागेको सुन्दरी शर्मा पनि मोहित हुन्थिन् । साँझसम्म अंगहरू सलमलाएपछी उनी आफ्नो कामुकता कामुमा राख्न सक्दिन थिईन् । उनको केटा साथीलाई शरिर पुर्ण सुम्पेर यौवनमा हराउथिन् । उनिसंग अरू केटी साथीहरू र तिनका केटा साथीहरू भएपछी उनलाई सहज बनेको थियो । धेरै जना अरू केटी साथी भएपछी अरूले शंका गर्ने ठाउं पनि रहदैनथ्यो । आफन्तलाई के थाहा र ? यसै गरी उनको दिनचर्या चल्दै गयो । धेरै पटक धेरै जनासंग प्रेम सम्बन्ध गासियो र यौन सम्बन्ध सम्म पुगेर अन्त्य भयो ।
मेनपावरमा धेरै खालका दलाल थिए । सुन्दरी शर्मा देखेशी मोहित हुन्थे । यि आफैमा बेईमानीको धन्दा गरेर बिदेश जानेसंग ठगेर खाने प्रबृती भएका ब्यक्तिहरूलाई बिलासी जीवन र सुन्दरीहरू नशा नै हो । त्यसमाथी सुन्दरी शर्माको जवानी देखेसी नजीस्काउने कुरै भएन । पहिला भन्दा सुन्दरी शर्मालाई सहज पनि भएको थियो । त्यसमाथी महंगा रेष्टुरेन्ट र क्याफेमा खाना खुवाऊने र घुमाऊने भएपछी दलालहरूको झुटो प्रेममा नराम्ररी फसेकि थिइन् । दलालहरूले जति पनि पैसा खर्च गर्दथे । सुन्दरी शर्माले पैसाको मोहको कारण स्नाकोत् र तह अध्यन गर्न सकिनन् । वास्तविकता जस्तो भएपनि रूमको खर्च आफैले टार्ने र भाई बहिनीलाई रेखदेख गर्ने भएपछी जो कसैले पनि ब्यवाहारिक सोच्छन् । झन् उनका माता पिताले नसोच्ने कुरै आएन । भाई बहिनीलाई पनि दिदी अफिस जानुहुन्छ र बेलुका आऊनुहुन्छ र रेखदेख गर्नुहुन्छ भनेसी कुनै चिन्ता थिएन ।
आफ्नो तहका साथीहरू सबै बिबाहित भएपछि छब्बीस बर्षको उमेरमा बिबाह गर्ने भोक सुन्दरी शर्मालाई चढ्यो । छिमेकी जिल्लामा बसोबास गर्ने हर्के संग उनको बिबाहको सम्बन्ध आफन्तद्वारा अघि सारियो । हर्के अति नै सोझो र पढेलेखेको थियो । दुबै जनाको एक आपसमा बिबाह भयो । पाँचथर आएर झापामा बस्दा उसको सम्पर्क भुटानी शरणार्थीहरू संग हुन पुग्यो । एउटा परिवारको एउटै स्तर र अर्को नेपाली स-भाषीको कारण उ अतिनै चिन्तित थियो । उता भारतियहरूले नेपाली नागरिकता लिएर नेपालीलाई दाष बनाएर अघि बढ्नु र यता नेपाली भाषा र् देश भेषभुषा स-भाषीय नेपालीहरूले एउटा नागरिकता सम्म नपाएर क्याम्पमा जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यताले उ जस्तै अरू नेपालीहरूलाई पनि दुखित पार्दथ्यो । ईलाम,पाँचथर,भोजपुर र आसपासका नेपालीहरूको उब्जनी कम भएको कारण सन्तति पाल्न जागिरको सन्दर्भमा आफुलाई अनुकुल हुने ठाउ आसाम, भुटान र म्यान्मार सम्म गएर बसोबास गर्न थालेका थिए ।
पछी राजाले दु:ख दिन र मार्न थालेपछी उनिहरू आफ्नै माटो नेपालमा बसोबास गरि गुजारा टारि रहेका थिए । झापाका केही जमिनदार र सामन्ती प्रबृतिका ब्यक्तिहरूले बेला बेलामा दुख माथी दुख दिन्थे । सुन्दरी शर्माले पहिल्यै देखीको झ्याम्मिएको प्रेम सम्बन्धलाई कसि लगाउन सकिनन् । बिबाह पश्चात पनि साथी भनेर भित्र भित्रै आफ्नो सम्बन्ध चलाई राखेकी थिईन् । सुरु-सुरुमा हर्केलाई मतलब नै लागेन पछी भएपछी तिनीहरूको बेला न कुबेला आउने कल तथा सन्देशले चिन्तित तुल्यायो । श्रीमान निदाएपछी आधा रातमा उठेर सानो स्वरमा कुमारी शर्मा फोन गर्दथिन् । सधै एकनाशको कहाँ हुन्छ र कहिले काही हर्के न निदाएको बेलामा थाहा पाई हाल्थ्यो । श्रीमतीको वानी देखेर बिचरा ! हर्के आजित भयो र श्रीमतीलाई सुधार्न हप्काउन थाल्यो ।
केही बर्षहरू बिते । हर्केले हप्काउन थालेपछी मेरो शंका गर्न थालेको र जागिर पनि नखाएको भनेर गुनाशो सुन्दरी शर्माले भाई र बैनी मार्फत माईति सम्म पुर्याउथिन् । धेरै हैरान भएपछी हर्के श्रीमतिसंग सशंकित हुन पुग्यो । नहोस् पनि कसरि बेला न कुबेला प्रेम सम्बन्धको सन्देश र कलहरू आउथ्यो । न त सुन्दरी शर्मा कुनै मनाही र ईन्कार पनि गर्दिनथिन् । उल्टै डिभोर्स दिने धम्कि दिदै अर्काको घरमा चर्पि सोर्न नोकर जस्तो गर्थि । एक पटक अति भएपछि हर्केले साढुदाईलाई भन्दिएछ । साढु दाईले बेस्मारी हप्काए पनि । बिस्तारै सुन्दरी शर्माले नाजायज सम्बन्ध बारे ढाकचोप गर्न र आफ्नो परिवार सम्म पुग्न नदिन भाई र बैनीलाई पनी आफ्नो पछ्यमा मोडिन् । भाई र बैनीलाई आफुतिर मोडेर श्रीमानसंग झगडा गराउथिन् ।
एक दिनको कुरा हो । सुन्दरी शर्माको ठूली आमाको छोराको बिहाहको निम्तो आयो । दुबै जना बिबाहको निम्तो मान्न भोजपुरतित लागे । बिच बाटोबाट सालासाली पनि चढे । खाजा खाने बेला भएपछि सुन्दरी शर्मा पहिला नै ढोकाबाट झरि । भिनाजुको मलिन अनुहार देखेर उनिहरूले सोधे । "पागल भएको पागल" उसको शब्द गर्जियो । उसका बैनी भाई तिन छक परे र चुप लाग्न आग्रह गरे । बेलुका साझमा बिबाह स्थल पुगे । आफन्तको अगाडी आफ्नो पोल खोलिन्छ भनेर त्यता पनि सबैको अगाडी कृतिम पागल बनाईन् सुन्दरी शर्माले । ति आफन्त पनि कस्ता आफ्नी चेलिले सबैको अगाडी आफ्नै बेईज्जत गर्दैथिईन् । कसैले उनलाई हप्काएनन् । बिचरा ! हर्केलाई कृतिम पागल बनाईयो । जता पनि छोरीले दुख पाउने भै पागलसंग बिबाह भयो भनेको कुरा सुनेपछी हर्के मुर्छित भयो । बिबाह बाट सिधै काठमाडौँ आउन उसले आफ्नी श्रीमतीसंग अनुरोध गर्यो तर, सुन्दरी शर्माले सुनिनन् । किनकी उनलाई आफ्नो श्रीमानको चरित्र हत्याएपछी सबै कुरा सुन्छ भन्ने लाग्दथ्यो । दूलाही भित्राएपछी फेरी उहि कृतिम चर्चा गर्दै हिडिन् । बिहाह सकेपछी सुन्दरीको जोडी र जेठीको जोडी घर फर्के । बाटोमा हर्के अति नै चिन्तित भयो । नहोस् भयो पनि कसरी ? उसको श्रीमतीले इज्जत पुरै लिलाम गरिसकेकी थिइन् । पागल भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ मानवले सबै इज्जत गुमाईसकेको हुन्छ । सामाजीक रूपमा हर्केले भयंङ्कर शंत्राप खेप्यो । बाटोमा घर फर्कने क्रममा भिनाजुले दिदीको पुरै झोला बोकेका थिए तर हर्के चिन्ताले रूदै थियो” । अरूको त श्रीमान यति असल छन् झोला बोक्दिन्छन् । आफ्नो त भाग्य नै छैन श्रीमान पनि यस्ता परे” सुन्दरी शर्माले चुप लागीरहेको हर्केलाई सिधै ब्लाकमेल गरि । त्यत्तिकैमा काठमाण्डौ आइपुगे । रातपरेपछी दुबैजना सुन्दरीको भाईको रूममा सुते । रातको साढे दश बज्यो । सुन्दरी शर्मालाई बैनीले सोधिन् “दिदी भिनाजुलाई के भयो ? बिरामी पो छन् त” ! मर्योस् खाते ! सून्दरी शर्मा कड्किन् । संगैको छेऊमा रहेको हर्के रातभरी रोयो । यो समय बिचमा उ बेरोजगार भयो ।
भनेको जस्तो जागिर नपाएपछी इन्जिनियर पढेको हर्के अति नै दूखित भयो । उसले आफ्नो श्रीमती यस्ति र उस्ती भनेर कसैलाई पनि भनेन । श्रीमतीको बारेमा अरूसंग दूखेसो उसलाई गलत लाग्थ्यो । सुन्दरी शर्मा जागिर खान्थिन र पैसा कमाउथिन् । पैसा राम्रैसंग कमाएको र छोराबाट पनी बूहारीको गल्ति नभनेपछी सबैले सून्दरी शर्मालाई मन पराउथे । सुन्दरी शर्माले आफ्नो श्रीमानलाई प्रयोग गरेर अमेरिका र अष्ट्रलिया जाने सपना देख्थिन् । त्यहि भएर हर्केसंग बिबाह गरेकि थिइन् । समय बित्दै गयो । उनको बानी सूध्रिएन । अरूको फोन र प्रेम सम्बन्ध सहितका सन्देशले हर्के वाक्कैथ्यो । वास्तविकता के हो भनेर हर्के सोध्दथ्यो र सून्दरी शर्मा ठूला-ठूला स्वरले चिच्याऊथिन् । ओल्लो पल्लो रूमका मान्छेहरू पनि अचम्मीत हून्थे । पागल भाको भनेर सून्दरी शर्माले ब्लाकमेल गर्दथिन् । सबैको अगाडी सून्दरी शर्माले हर्केलाई कृतिम पागल बनाइन् । आफ्नो नाजायज सम्बन्ध लूकाउन उनले आफ्नो श्रीमानको जीवन सकिन् । हर्के माइत पूग्यो भने वास्तविकता सबै भन्छ भन्ने ठानेर उनले अर्कै निउ पारेर माइत पूगिन् । शङ्का गर्छ, जागिर पनी खादैन पागल भयो त्यसको कूरा नसून्नोस् भनेर अनूरोध गरि सकेकी थिई । हर्केका सासु-ससुरा पनि पर-पर भए ।
हर्केले आफ्नो आफन्तबाट हात धोयो । हर्केले पाएको कृतिम पागल उप-नामले उसलाई सामाजीक रूपमा सन्त्राप ( सोसियल फोबिया ) थप्यो । सुन्दरी शर्मा आफ्नो श्रीमान नभएको बेलामा आसपासको यूवा संगै सम्बन्ध राख्दथिन् । पहिलाको धेरै संगको सम्बन्धले श्रीमानसंग मात्र सिमीत हून सकिनन् । बिचरा ! हर्के खाना पकाएर बसेको हुन्थ्यो ! तर, सुन्दरी शर्मा बाहीर खाना खाएर आउथिन् कहिले मदिरा पिएर हल्लिदै आउथिन् । एउटा कुरा लुकाऊन यस्ता हत्कण्डा अपनाइन् कि सबैसंग झगडा गराईन् । सालो द्वारा घाटीमा अठ्याएर कुट्न लगाईन् । बाउलाई मार्दिने धम्की दिनको लागी अनूरोध गरिन् । हिउद पछि हर्केको भाई काठमाण्डौ आयो । गोरो र खाईलाग्दो हुनाले हुनाले बिस्तारै देवरलाई पनि प्रेमलिलामा ल्याइन् । धेरै पटक यौन सम्बन्ध राखिन् । कहिले काही हर्के डराउथ्यो र दाईले थाहा पाएपछी ठुलो असर हुने दुखेशो पोख्थ्यो । "पागल भ एको भन्दिमला पागलको कुरा कसले पत्याउछ र” ! नडराए हुन्छ । सून्दरी शर्मा मानबहिन खुरापाती कामले हर्केको अस्तित्व सकियो । शनिबार बिहान हर्के नुहाउन गयो ।
नुहाईसकेर रूममा आउदा त देवर भाउजुले ब्लु ( सेक्स भिडियो ) निशंकोच रूम खोलेर हेरेको देखेसी दुबै जनालाई उसले दुइ दुइ थप्पड लगायो । एक छिनमै शाली आएपछि दुबैले इज्जत बचाउन अस्विकार गर्दै उल्टै हर्के पागल भएको र उसको कुरा नपत्याउन आग्रह गरिन् । तर बास्तविकता अर्कै थियो । अब हर्केलाई फन्दा पर्यो । भाईको र श्रीमतिको अनैतिकताको बारेमा आफन्तलाई र घरमा सम्म केही भन्न सकेन । किनकी यो अति नै संवेदनशिल र परिवारको मान सम्मान नै बढार्ने भ एकोले उ चुप्प बस्यो । देवर भाऊजु भएर आफ्नो अस्तित्व बचाउन सबैको कान फुके । सबै परिवारको बर्ष देखिको मान सम्मान जाने हुनाले उसले डिबेट गरेन । देवर भाउजु मिलेर कान समातेर माफी माग्नको लागी समाचार पठाए । हर्केको जीवन समाप्त भैसकेको थियो ।
उसले आफ्नो भाई परिवार र श्रीमती सबैलाई छोडेर अर्को देश पुगेर पानी पिउने निधो गर्यो । राजापछी लेन्डुपहरू बढिरहेको नेपालमा यस्तै खुरापाती कार्यले परिवार र समुदाय टुक्रायो । छाडा महिलालाई आमा र धर्तीको उपनाम दिने समाजले इमान्दारी हर्केलाई चिन्न सम्म सकेन । उल्टै खराबको बिल्ला भिरायो । यहा सत्तरी बर्ष श्रीमती र परिवार पाल्नुपर्ने श्रीमानलाई नारी दवाउने परम्परावादी भनिन्छ तर, छ महिनासम्म पनि श्रीमान पाल्ननसक्ने महिलाहरूको कुरा गरिन्छ, आरक्षण दिईन्छ, महिला अधिकारको आवाज उठाईन्छ । हाम्रो समाजमा महिला अधिकार र आरक्षणको नाममा नैतिक पतन र नाङ्गिने क्रम बढ्दै छ । केटा मान्छेहरू बाथरूममा सानो कट्टु लगाएर नुहाउन लाजमान्दैछन् तर महिलाहरू त्यहि नुहाउन पहिरिने छोटो कट्टु लगाएर शहर घुम्दछन् ।
"आफ्नो पनको आभाष दिन नसक्ने आफन्त हुन्न"
आफ्नो पन दिन नसक्ने आफ्नो मान्छे र आफन्त हुन्न ...
फगत् नाता मात्र लागेका हुन् दु:ख र आपती सुन्न
फाईदाको लागी सजाए , सपनामा गगन चुन्न
यस्ता मानब नामका मात्र प्रिय बरू म छुन्न
आत्मियतामा छुरा चाली बुध्दि बिबेकता भो मुन्न
जसले घात गर्छ सँधै देखावटी नाता मात्र बुन्न
राबण जस्तो घातक बनी थाल्ला चरित्र ति थुन्न
आफन्त यि होइनन् जीवन हारे भने पनी म रून्न
भरोसा ठूलो बोकाई तिनले थाल्लान् फाइदा गुन्न
आफ्नो मान्छे होइनन् मुखका लवज मिठा सुन्न
साथ नदिनेलाई साथी भन्न सकिन
आफ्नो पन छैन आफन्तमा गन्न सकिन
उपदेश दिने आए ग ए सहयोगी छैनन्
मानबका रूप मात्र आफ्नो कन्न सकिन
Smile Gajurel, Karna Gurung र 19 अन्य सँग।
· 10 घण्टा ·
नैतिकता र आचरण गुमाएपछी
सम्पत्तिको के मतलव शिनो गनाएपछी
आजकाल छोटो कट्टुको फेसन बढ्यो
जवानीले अन्धो बनि युवती बहुलाएपछी
देशभक्त नेता खोज्न मुष्किल छ यहा
लेन्डुप प्रबृतिले ब्यक्तित्व जमाएपछी
कसैलाई चारवटा कट्टु फटाऊनु छ
समुन्द्रि किनारमा ह्रासलिला चलाएपछी
बिदेशको भोकमा आफ्नो श्रीमान् छोड्छन्
साथमा नाठो रमाएपछी हात समाएपछी
तराई दान दिन्छौ तर छिमेकी मान्दैन रे
प्रभुमा यिनले हजुरी लगाएपछी
स्माईल एक आत्मिय शक्ति हो बुझेस्
अन्दाजमा देखिन्न सहजै जलाएपछी
भोगाईको कुरा गर ऊख्खान टुक्काको होईन
ग्यासलाईन देश्मै आको छैन झुक्काको होईन ?
एऊटा सिलिण्डर घरमै पुगेको छैन याँ
पाईप घरघरमा कसरी भुक्काको होईन ।।
सहिसंग बरू भुक्छ भुस्याहा कुकुर मिलेर
चोरफटा हिँड्दा हिँड्दै घाममा सुक्काको होईन
रैनरैछ धरातल यथार्थ भोगाई देखिन
हावा हावा बोलि रह्यो चिलीम हुक्काको होईन
सरकारको ऊपस्थिती कहाँ छ देखाऊ आएर
जताततै अन्योल र अराजक लुक्काको होईन
Posted by Gajurel Balkrishna at Friday, January 15, 2016
लुट्नेले देशै लुटे कता गयो मानब अधिकार
हत्या गरी कैयौँ छुटे कता गयो मानब अधिकार
खाद्यान औषधि रोकि नाकाबन्धी लगाऊँदा याँ
भूकम्प पिडित टुटे कता गयो मानब अधिकार ।।
Nepali Literature Forum
गजल मलाई लिन काल निस्कने छ| मृत्युको नयाँ साल निस्कने छ|| भाकेर पल पल मेरै मृत्यु| खुशीको जिउ डाल निस्कने छ|| ... चिताको खातहरु माथि रँ&#...
गजल (संरचना-8/4, बिश्राम- पाँचौँ अक्षर र आठौँ अक्षरमा) कण-कणको आवाज भिन्न हुन्छ एकै नेपाली समाज भिन्न हुन्छ॥ बीर गाथाले भरेको उच्च शिर .....
तियाली (१) आफ्नैको भर हुन्न झुटले मुटु छुन्न त्यसैले कोहि रुन्न ।। (२) बिश्वास गर घात गरेपनि मानब पात्र तलै झरेपनि प्रसिद्धि मिल्छ ...
Smile Gajurel डिसेम्बर 19, 2015 5:01अपरान्ह बजे · कबिता-----भूकम्प पछी जीन्दगीको बास एकै प्रहरमा लडेपछी मेरी आमा ... आँखा सुमसुमाऊँदै ...
गजल नेपाली खुट्टा ताना-तानले बिग्रे । आरोप लाई भना-भनले बिग्रे ॥ समस्या आफ्नै थाहा भएन किन? लुकाइ गल्ति जाना-जानले बिग्रे ॥ लालच माथी ...
रुवाइ आफ्नै मान्छे, पराइ भया,े छैन कोहि मेरो ।। पूर्ण रुप्मा, बसाइँ गया,े छैन कोहि मेरो । अन्योलमा सपना सकें, मात्र लाश बाँकि ।। प्राण...
गजल पहिरोमा जनता मर,े सरकार चुप छ ।। प्रायः जसो बिचल्लि पर,े सरकार चुप छ ।। खानेकुरा बासको लागी, रात भरि तड्पिंदा ।। भोकै प्यासै बैतर्...
गजल सागरमा आगो बाल्छु, बिचार सब्को गाल्छु ।। देशैभरि स्वर्ग रच्ने, नविन कार्य थाल्छु ।। जनताको आँखा माथि, लगायौ किन धोति ? हेरि राख चो...
गाजलु ति आँखा भित्र नलुकाएकै जाति हुन्छ! पैरो लाग्छ जीन्दगिमा कष्टले नाना भाँति हुन्छ!! अन्धकार छान्ने गर्छन् आफ्नै भाग्यको रेखाहरु! नसोच...
Balkrishna Gajurel. Watermark theme. Powered by Blogger.